Brite Eyes Iii | Mega Planet Co., Ltd
Brite Eyes III supports eye comfort and helps protect healthy eye structure and function with an FDA approved, clinicallyvalidated lubricant, glycerin, as well as N-acetyl-carnosine.
That’s why we formulated Brite Eyes IIIwithaclinically-validated, FDA-approved lubricant, glycerin, that is used to refresh and lubricate eyes without irritation.1
The Brite Eyes III formula also contains N-acetyl-carnosine to help protect healthy eye structure and function from oxidative and glycation stresses that can accumulate with age.2-5
A box of Brite Eyes III contains two individual, five-milliliter vials. This reduces the risk of bacterial contamination and makes it convenient to keep Brite Eyes IIIreadily accessible at home, in the office, purse or pocket...or anywhere access to soothing eye drops is needed.
Other ingredients : boric acid, citric acid, hypromellose, N-acetyl-carnosine, potassium bicarbonate, purified benzyl alcohol, sterile water.
U. S. D. o. H. a. H. Services. Part 349 Opthalmic Drug Products For Over The Counter Use. Accessed 05/29/2019. More
Clin Interv Aging. 2009;4:31-50
Vet Ophthalmol. 2006;9(5):311-6.
Rapid Commun Mass Spectrom. 2010;24(19):2900-8.
Am J Ther. 2009;16(6):517-33.
Stop use and askadoctor if you experience eye pain, changes in vision, continued redness or irritation of the eye, or if the condition worsens or persists for more than 72 hours
ဆေး ၂ ပုလင်း
အကောင်းဆုံး မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်ဖြည့်စွက်မှု
အသက်ကြီးရင့်လာသည့်အလျောက် မျက်စိများသည် ကျိန်းစပ်ခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့ခြင်း ဖြစ်ပွားစေသည့် အနှောက်အယှက် မျိုးစုံကို ခုခံနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ သင့်လျော်သည့် မျက်စဉ်းဆေး အစက်ချခြင်းဖြင့် မျက်စိကျိန်းစပ်ခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့ခြင်းကို လျော့ချပေးသည်။
Brite Eyes သည် ကောင်းစွာ ထုတ်လုပ်ထားသည့် မျက်စဉ်းရည် ၂ပုလင်း ကို ပံ့ပိုးပြီး မျက်စိကို ကျိန်းစက်ခြင်းမရှိဘဲ သက်သာစေမည်။hydromethyl-cellulose and glycerin သည် မျက်စိကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ FDA လက်မှတ် ရထားပြီး စွမ်းအားမြင့် antioxidants and anti-glycating agents များကို အပြည့်အဝ ပံ့ပိုးပေးသည်။ Brite Eyes formula သည် နည်းလမ်း ၂ မျိုးဖြင့် မျက်စိအား ကုသပေးသည်။
Brite Eyes III အား နေ့စဉ် မျက်စိ တစ်ဖက်စီအား 1-2 စက်စီ ချပေးရန် အကြံပြုထားသည်။ Brite Eyes III တစ်ဗူးစီတွင် 5mm စီ ပါဝင်သည့် မျက်စဉ်းရည် ၂ပုလင်း ပါဝင်သည်။ Brite Eyes ကို ကွဲပြားသည့် ပုလင်းများအတွင်း ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် bacteria ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ပုလင်းသေးများ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူမှ ဤဆေးကို အိမ်၊ ရုံးခန်း၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ အင်္ကျီအိတ်နှင့် အခြားနေရာများတွင် လိုအပ်သည့်အခါ အသင့် အသုံးပြုစေနိုင်သည်။
အမြင်ပုံစံအသစ်နှင့် တူညီသည့် အရည်အသွေး ပါဝင်မှု
ဤပုံစံသစ်ကို မကြာမီ ထုတ်လုပ်မည်။
Other ingredients : boric acid, citric acid, N-acetyl-carnosine, potassium bicarbonate, Purified benzyl alcohol, and sterile water.
သက်ရောက်မှုရှိသည့် မျက်စိများကို လိုအပ်သလို 1-2 စက်ချပေးရန်